Daawo: Qarax ay ku dhinteen in kabadan 22 ruux oo ka dhacay goob lagu qabanaayay bandhig faneed oo ku taala magaalada…. | Kismaayo24 News Agency
Daawo: Qarax ay ku dhinteen in kabadan 22 ruux oo ka dhacay goob lagu qabanaayay bandhig faneed oo ku taala magaalada….
Tuesday May 23, 2017 - 9:44 under Somali News by Tifaftiraha K24
Labo iyo labaatan ruux oo ay ka mid yihiin carruur ayaa hadda la ogyahay in ay ku dhinteen 59 kalana ay ku dhaawacmeen weerar argagixiso looga shakisan yahay oo ka dhacay magaalada Manchester ee dalka Britain.
Dad goob joogayaal ah ayaa sheegay inay maqleen dhawaq xooggan markii ay dhamaadeen heeso ay goobtaasi si toos ah uga qaadeysay Ariana Grande, oo ah fanaanad caan ah oo u dhalatay dalka Mareykanka.
Lahaanshaha sawirkaPETER BYRNE
Jahwareer ka dhashay weerarka Manchester
Goobjoogayaasha ayaa sheegay inay maqleen qarax ka dhacay albaabka hore ee laga galo goobta uu bandhig faneedku ka socday.
Boosteejada tareennada Manchester Victoria oo u dhaw goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa la xiray, waxaana la baajiyay dhammaan safaradii tareenada ee qorsheysnaa.
Waxa sababay qaraxa lama garanayo, balse ra’iisal wasaaraha Britain, Theresa May, ayaa sheegtay in falkani ula dhaqmayaan inuu yahay mid argagixisnimo.
Waxay hakisay ololeehdii doorashada guud waxayna maanta shir guddoomin doontaa kulan degdeg ah oo ay isugu imaan doonaan wasiirradeeda. Waxay ka arrinsan doonaan sida ay uga jawaab celin lahaayeen weerarkan.
May ayaa tiri: “Waxaan isku dayaynaa in aan helno macluumaad dhameystiran oo ku aadan sida ay wax uga dhaceen Manchester.
Jahwareer ayaa jiray
Waxaana goobta isku gedaamay ciidammada booliska iyo kooxaha gurmadka, iyadoo la xiray waddada marta halka uu qaraxa ka dhacay.
Nin ku sugnaa halka uu qaraxa ka dhacay ayaa sharaxay sida qaraxa uu u dhacay, iyadoo taagerayaashii ay ka baxayeen halkii lagu qabanayay bandhig faneedka.
Oliver Jones, 17 jir bandhig faneedkana kala qeyb galay walaashii ayaa yiri: ”dhawaqa qaraxa waxaa laga maqlay goobta oo dhan qof walbana wuxuu billaabay inuu baxsado”.
Ilaa iyo hadda maxaan ognahay?
22 qof ayaa dhimatay 59 kalana way ku dhaawacantay qaraxa.
Waddooyiinka ayaa markiiba la xiray.
1.30 pm wakhtiga Manchester booliiska ayaa qarxiyay wax ay uga shakiyeen inay ahayd bambaano.